Ch 15 Matthew – 2hove
musha / Bhaibheri / Evhangeri yaMateu / Ch 15 Matthew
15:1 Then the scribes and the Pharisees came to him from Jerusalem, vachiti:
15:3 But responding, akati kwavari: “And why do you transgress the commandment of God for the sake of your tradition? For God said:
15:4 ‘Honor your father and mother,'uye, ‘Whoever will have cursed father or mother shall die a death.’
15:7 Hypocrites! How well did Isaiah prophesy about you, vachiti:
15:10 And having called the multitudes to him, akati kwavari: “Listen and understand.
15:15 uye kuteerera, Petro akati kwaari, “Explain this parable to us.”
15:16 Asi iye akati: “Are you, kunyange ikozvino, without understanding?
15:21 Vakabva ipapo, Jesu akaenda kunzvimbo yeTire neSidhoni.
15:22 uye tarira, mumwe mukadzi muKenani, womunzvimbo idzodzo, vakadanidzira, achiti kwaari: "Tora ndinzwirei, tenzi, Mwanakomana waDhavhidhi. Mwanasikana wangu akabatwa kwazvo nedhimoni. "
15:23 Haana kutaura shoko kwaari. Uye vadzidzi vake, richiswedera pedyo, kumuteterera, vachiti: "Mudzingei, nokuti anoramba achishevedzera ari shure kwedu. "
15:24 uye kuteerera, akati, "Handina kutumwa kunze makwai vakawa kubva imba yaIsraeri."
15:25 Asi iye wacho paakasvika kwaari, vachiti, "Ishe, ndibatsire."
15:26 uye kuteerera, akati, "Hazvina kunaka kutora chingwa chevana, akakandira imbwa."
15:27 Asi iye akati, "Ehe, tenzi, asi imbwa duku uyewo kudya kubva mafufu anowa patafura ravanatenzi vadzo. "
15:28 Zvino Jesu, kugamuchira, akati kwaari: "O mukadzi, kutenda kwako kukuru. Ngazviitwe kwamuri sezvaunoda. "Mwanasikana wake akapora kubvira paawa iyoyo.
15:29 Zvino Jesu wakati apfuura kubva ipapo, akasvika pedyo negungwa reGarirea. Uye akwira mugomo, akagara pasi ipapo.
15:30 Zvino zvaunga zvikuru zvikauyisa kwaari, ane navo mbeveve, mapofu, zvirema, vakaremara, uye vamwe vazhinji. Vakavakanda pasi patsoka dzake, uye akavarapa,
15:31 zvokuti vazhinji vakashamiswa, vachiona mbeveve dzichitaura, vanokamhina vachifamba, nemapofu achiona. Ivo akakudza Mwari waIsraeri.
15:32 Jesu, kudana pamwe vadzidzi vake, akati: "Ndine tsitsi mapoka evanhu, nekuti ivo vakatsungirira neni zvino mazuva matatu, uye havana chokudya. Uye handisi kuda kuvabvisa, nokutsanya, zvimwe vangaziya panzira. "
15:33 Zvino vadzidzi vakati kwaari: "Kubva apo, ndokubva, mugwenga, tingadai kuwana chingwa yakakwana tigutise chaunga chikuru?"
15:34 Zvino Jesu akati kwavari, "Mune zvingwa zvingani chingwa here?"Asi vakati, "Nomwe, uye hove shoma shoma. "
15:35 Uye akarayira mapoka acho evanhu kuti vatsenhame pasi.
15:36 Akatora zvingwa zvinomwe nehove, uye muchivonga, akamedura, ndokupa vadzidzi vake, uye vadzidzi vakapa vanhu.
15:37 Zvino vakadya vose, vakaguta. uye, kubva zvakanga zvasara nezvimedu, vakanonga azere matengu manomwe.